ရေချိုးရင်း အသားအရေအစိုဓာတ်ကို ဘယ်လို ထိန်းသိမ်းမလဲ?? - သစ်ထူးလွင် (ကျန်းမာရေး) '; summ = summary_img; } var summary = imgtag + '
ရေချိုးရင်း အသားအရေအစိုဓာတ်ကို ဘယ်လို ထိန်းသိမ်းမလဲ??
ရေချိုးပြီး အချိန် သုံးမိနစ်လောက် ကြာတဲ့အခါမှာ အစိုဓာတ်ပါတဲ့ ခရင်မ် ဒါမှမဟုတ် လိုးရှင်းကို လိမ်းပေးတာက အရေပြား ခြောက်သွေ့တာနဲ့ ယားယံတာကို သက်သာ စေပါတယ်။ အေးမြတဲ့ အချိန်တွေမှာ ပျစ်ချွဲတဲ့ အစိုဓာတ်ထိန်း ခရင်မ်ကို များများ လိမ်းပေးပါ။